Unmanned Ahịa Drones | Martech Zone
Fraịdee gara aga, mụ na otu enyi m, Bill Hammer nwere mkparịta ụka dị ukwuu. Ọnọdụ ya bụ na ịnwe nnukwu mmefu ego nke ndị agha emeghị ihe ọ bụla ma lie akụ na ụba. Ekwuru m na ndị agha, n'ọtụtụ ụzọ, ha na gọọmentị na-etinye ego na mmepe nke teknụzụ ọhụrụ na imepụta oke. M ga-agbakwunye na, na azụmahịa nke 'igbu ma ọ bụ gbuo', stakes adịghị elu mgbe ọ bịara na ọ dị mkpa maka mma na arụpụtaghị ihe.
(Biko edela m 'ọnwụ mongerer' ọnwụ ọnwụ na nke a. Abụ m kpamkpam ọ bụghị na-ekwu na ọnụahịa nke teknụzụ na mmepụta ihe kwesịrị ịwụfu ọbara.)
N'ihe niile niile kwuru, lee akwụkwọ Gizmodo unmanned ahịa drones. Mmetụta na akpaaka! N'ezie, ejighi m n'aka na nke a bụ mmeri nye ndị na-azụ ahịa. Ihe ikpe azu m choro bu ijiji buzzing m Bluetooth PDA na agwa m na deodorant no n’ire ihe ozo.
Ikekwe Bill nwere isi okwu…
Marketing na-emekọrịta ihe na Google Spreadsheets